नेपाल सद्भावना पार्टीलाई सक्रिय पार्दै सरिता गिरी, शुरु गरिन् लोकतान्त्रिक अभियान - SYMNetwork
नेपाल सद्भावना पार्टीलाई सक्रिय पार्दै सरिता गिरी, शुरु गरिन् लोकतान्त्रिक अभियान
२०७७ आश्विन ४, आईतवार १२:२२ by Raunak
अहिले सरिता गिरीको आफ्नो कुनै संगठन छैन । विभिन्न संगठनलाई जोडेर बृहत लोकतान्त्रिक अभियान बनाएकी छिन् । तर अन्ततः उनी पछि नेपाल सद्भावना पार्टीमा नै सक्रिय हुने स्रोतहरुको दावी छ । यस लोकतान्त्रिक अभियानमा कुन–कुन संस्थाहरु छन् भन्ने बारेमा भने अहिले बताउन नमिल्ने गिरीको भनाई छ । अहिले आफू तराई मधेशका मेचीदेखि महाकालीसम्मको यात्रामा निस्केको र त्यसक्रममा हरेक प्रकारका अगुवा व्यक्तिहरुसँग भेट्ने, छलफल गर्ने अनि गठबन्धनलाई अझ संगठित बनाएपछि मात्र तीन महिनापछि लोकतान्त्रिक अभियानको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउने उनले बताइन् । पार्टी बनाउने विषयमा उनले केही बताउन चाहिनन् ।
गिरी यसरी फर्किदैछिन् सद्भावनामा ?
एक समय नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष सरिता गिरी थिइन् । उनले २०७१ फागुन १८ गते अनिल झाको तत्कालिन संघीय सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण गरिन् । र एकीकृत पार्टीको नाम राखियो नेपाल सद्भावना पार्टी । पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि नेपाल सद्भावना पार्टीकै पञ्जा (हात) छाप राखियो । तर केही दिनमै गिरी र झाबीच खटपट शुरु भयो । उनले झासँग आफ्नो पार्टी फिर्ता माग्न थालिन् ।
झाले नेपाल सदभावना पार्टी फिर्ता दिन मानेनन् । त्यसपछि गिरीले नेपाल सद्भावना पार्टी आफ्नो हो भनि दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । यता अनिल झाले नेपाल सदभावना पार्टीको महाधिवेशन गराएर त्यसको आधिकारिकता प्राप्त गरे । २०७२ असोजमा नेपाल सद्भावना पार्टी परित्याग गरेको उनले घोषणा गरेकी थिइन् । र त्यतिबेला उनी आफू बुद्धिजिवी र समाजिक संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
अनिल झाले नेपाल सद्भावना पार्टी लिएर २०७४ बैशाख ७ गते राजपा नेपाल बनाएपछि गिरीले त्यसको भोलिपल्ट नेपाल सद्भावना पार्टी नेपालकी अध्यक्षको रुपमा विज्ञप्ति जारी गरि एकीकरणको विरोध गरेकी थिइन् । उनले त्यतिबेला नेपाल सद्भावना पार्टी ब्युँत्याउने घोषणा गरेकी थिइन् । तर कानुनी रुपमा सो पार्टीलाई ब्युँत्याउन नसकेपछि अन्ततः उनी तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरिन् । सो पार्टीबाट उनी समानुपातिक संसद हुँदै संसदीय दलकी उपनेता समेत बनिन् । अढाई वर्ष नबित्दै उनलाई समाजवादी पार्टीले संसदबाट निलम्बन गर्नुका साथै पार्टीबाट पनि निश्काशन गर्यो । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई समेटेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोध गरेपछि उनलाई पार्टीले कारवाही गरेको थियो ।
२०७४ मा अनिल झाले राजपा नेपाल बनाएपछि प्रोफेसर डा.राजेन्द्रप्रसाद सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर पार्टी एकीकरणमा गएपछि त्यो नामको पार्टी एक वर्षसम्म कसैले दर्ता गराउन नमिल्ने भनेपछि राजेन्द्रप्रसाद सिंह त्यो पार्टीका लागि एक वर्ष कुरेको सो पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए । अनिल झाले राजपा नेपाल बनाउँदा त्यसको विरोधमा पार्टी छाडेकाहरुले नै नेपाल सद्भावना पार्टीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उनीहरुले २०७५ भदौं २५ गते नेपाल सद्भावना पार्टीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । र, त्यसको आधिकारिकता २०७६ मंसिर २६ गते मात्र पाएको महतोले बताए । जसपा नेपाल गठन भएर समाजवादी पार्टीले पञ्जा (हात) छाप छाडेपछि अहिले नेपाल सद्भावना पार्टीले सो छाप पनि प्राप्त गरेको छ ।
समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित भएकी सरिता गिरीे पुनः राजनीतिमा संक्रिय हुनका लागि नेपाल सद्भावना पार्टी खोज्दै जाँदा सो पार्टी मधेशमा त भेटाइन् तर पार्टी अर्कैको हातमा गइसकेपछि उनले सोही पार्टीलाई मिलाएर अहिले लोकतान्त्रिक अभियान गठन गरेकी छिन् । अन्ततः पछि सोही पार्टीमा उनी सक्रिय हुने स्रोतले दावी गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक अभियान किन ?
सन् १८१६ र १८६० को दुई सन्धिअनुसार “तराई मधेश एक समग्र प्रदेश” निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक अभियान गठन गरिएको अध्यक्ष गिरीले बताइन् । सो सुगौली सन्धिअनुसार मात्र मधेश नेपालको हिस्सा बनेको उनले बताइन् । उनले असार ३१ गते सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको नयाँ नक्सा बनेपछि त्यो सन्धि इतिहास होइन मधेशका लागि वर्तमान भएको र सोही सन्धि अनुसार मधेशलाई एक समग्र प्रदेश बनाउनुपर्ने दावी गरिन् ।
मधेशमा स्वशासनको अधिकार प्राप्त नभएसम्म मधेश स्वाधिन नहुने बताउँदै उनले हिमाल, पहाड एउटा प्रदेश र तराई मधेश अर्को प्रदेश गरी देशमा दुईटा प्रदेश मात्र हुनुपर्ने र दुवै प्रदेशमा एक एकजना प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छिन् ।
संविधान तथा कानुन विपरित बहुमतको बलमा राजनीतिक दलको शासन रहेको भन्दै त्यसको उनले विरोध गरेकी छिन् । उनले नेपालमा मधेशको अस्तित्वको प्रमुख आधार भारत हो तर त्यो सम्बन्धलाई राज्यले तोड्न चाहेको आरोप पनि लगाएकी छिन् । त्यसको रक्षा गर्न लोकतान्त्रिक अभियानले संकल्प लिएको बताउँदै उनले खुल्ला सीमाको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएकी छिन् ।
Prevओपो एफ १७ प्रो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा आउँदै, जान्नुहोस यसका फिचर्स
nextएक महिनाभित्र ‘क्लिन फिड’ लागू गर्न सरकार र व्यवसायी तयार